अनेरास्ववियु नेताको संगीन आरोप : डा. केसी प्रतिक्रियावादीका मतियार | NepalDut
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव सुदेश पराजुलीले डा.गोबिन्द केसी कम्युनिष्ट बिरोधी एजेन्ट भएको दाबी गरेका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन र कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम बनाउन प्रतिक्रियावादीहरुले डा.केसीलाई मतियार बनाएको उनको आरोप छ ।
आइतबार काकडभिट्ट बहुमुखी क्याम्पस झापाले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रमुख अथितिका रुपमा बोल्दै सचिव पराजुलीले लोकप्रिय नाराको आबरणमा डा.केसीले कम्युनिष्ट बिरुद्ध श्रृखलाबद्ध हमाला गरीरहेको उनको दाबी छ । पछिल्लो परिर्वतन निस्तेज पार्नका लागि डा.केसी प्रयोग भइरहेको उनको दाबी छ । संसदको सर्बोच्चतालाई समेत अस्वीकार गर्ने केसी लोकतन्त्रकै लागि खतरा भएको उनको भनाई छ ।
सचिव पराजुलीले डा.केसी प्रबृत्तिलाई दृढताको साथ अस्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्यार्थीहरुलाई भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दै परिवर्तन बिरोध एजेन्ट बिरुद्ध उभिन आह्रवान समेत गरे ।
सचिव पराजुलीले वाईडवडी प्रकरणका प्रमुख दोषी तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएको दाबी गर्दै उनीमाथि छानविनको माग गरे ।
१६औँ पटक अनशनमा रहेका डा.केसीले चिकित्सा शिक्षाको सुधारको लागि होइन कम्युनिष्ट बिरोधी अभियानको मतियारको रुपमा काम गरेको उनको भनाई छ ।
पुस २५ देखि इलाममा अनशन थालेका डा. केसीलाई हाल काठमाडौं ल्याइएको छ। उनले ६ बुँदे माग राखेर अनशन जारी राखेका छन्। उनको अनशनका दुई बुँदा भने नित्तान्त चिकित्सा शिक्षासँग असम्बन्धित छन्। उनले राखेको द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित माग यस्तो छ, ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याइयोस्।’
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित नरहेको अर्को माग यस्तो छ, ‘निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।’